Waxqabdka 2008 | Somaliland Nordic Relief
Mashruucan dhimirku wuxu socday march 2007 – februari 2009 kaas oo ka socday magaalooyinka Hargeysa, Berbera iyo Burco. Mashruucu wuxu qayb ahaan ku sahabsanaa xarumaha Mental Health Centre ee Hargeysa iyo Berbera kuwaas oo aan dhisnay 2006. Xarumahan waxa maalintii lagu qaabilaa dadka xanuunka hore loogaga daweeyay cusbitaalada magaalooyinka ee laakiin u baahan la socod iyo daawo iyo dadka xanuunku ku cusub yahay ee u baahan la socod iyo daawaba. Mashruucu wuxu bixiyay mushaharka shaqaalaha ka hawlgala xarumahan iyo kharashka kale ee xarumaha sida laydhka, nadaafadda iwm.
Waxa kale oo uu mashruucu bixiyay kharashka nadaafadda ee cusbitaalada xanuunada maskaxda ee Hargeysa, Berbera iyo Burco, sida mushaharka shaqaalaha iyo qalabka nadaafadda iyo waliba gunnada maamulka cusbitaalada. Mashruucu waxa kale oo uu tababar siiyay shaqaalaha ka shaqeeya xanuunada maskaxda ee magaalooyinkaasi iyo dhallinyaro cusub oo loo tababaray hawshan si ay mustaqbalka uga shaqeeyaan hawlahan. Waxa kale oo mashruucu abaabulay siminaaro iyo doodo laga sii daayay TV-yada iyo idaacadda, kuwaas oo ku sahabsan wacyi galinta xanuunada ku dhaca maskaxda iyo sida loola dhaqmo dadka xanuunku ku dhaco. Mashruuca waxa ku baxay 637 000 swedish crowns oo markaa u dhigmaysay 91 000 dollar, waxana mashruuca fuliyay ururka GAVO (General Assistance and Volunteers Organization).
Mashruucan ku sahabsan cudurka halista ah ee HIV/AIDS-ka waxa aan ka bilownay magaalooyinka Burco, Sheekh, Berbera, Hargeysa, Wajaale iyo Boorama march 2008 waxanu socon doonaa ilaa februari 2010. Waxa dhawaan la soo gebagebeeyay sannadkii koowaad ee mashruuca, waxana fuliyay hay´adda waddaniga ah ee aan wadashaqayno ee GAVO. Mashruucan waxa ku bixi doonta lacag dhan 541 000 swedish crowns oo u dhigmaysay qiyaastii 85 000 dollars markii miisaaniyadda la sameeyay.
Waxyaalaha mashruucu fuliyay qaybteedii koowaad waxa ay kala yihiin:
1. Mashruucu wuxu tababaray 300 oo arday oo ka kala socda 10 dugsi oo ku kala yaala magaalooyinka kor ku xusan. Ardayda waxa tababarka ka dib loo sameeyay guddiyo ka qaybqaata la dagaalanka cudurka, kuwaas oo waxa ay barteen u sii gudbin doona ardayda kale.
2. Waxa Tababar loo sameeyay 30 hay´adood oo waddani ah oo ka shaqeeya la dagaalanka cudurka.
3. Waxa la qalabeeyay xafiiska SAHAN oo ah dalladda guud ee Somailand ee kulmisa ururada la dagaalama cudurka. Waxa kale oo laga caawin doona SAHAN sidii ay u samayn lahayd siminaaro ay ku qabato gobollada iyo waliba dabagalka iyo isku-dubbaridka la dagaalanta cudurka ee gobollada.
4. Waxa la sameeyay siminaaro lagu wacyigalinayo dadwaynaha deggen magaalooyinkaas.